एउटा गरिबसँग ‘घुस’ लिँदा १३ जनालाई एड्स – Janaubhar
एउटा गरिबसँग ‘घुस’ लिँदा १३ जनालाई एड्स
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २४, २०७४ | 319 Views ||
गोरखपुरको भटहट गाउँको घटना हो यो । जहाँ गाउँका १३ जनालाई एकैपटक एड्स भएको छ र त्यसको कारण हो उनीहरुको घुस्याहा चरित्र । घुस लिँदा कसरी एड्स हुन्छ भन्नुहोला, तर यहाँ एकजनालाई होइन, १३ जनालाई एड्स भइसकेको छ ।
त्यतिमात्र होइन भारतमा सुशासन सुध्रियो, गरिबको दिन आयो भनेर मोदी सरकारले लगाउने नारामै मोसो दलिएको छ ।
६ वर्षअघि भटहट गाउँमा २४ वर्षीया महिला नयाँ दुलही बनेर आइन् । मुम्बईमा रहन्थे पति । कारखाना मजदुर थिए । तीनवर्षमै उनको निधन भयो । बिरामी भइरहन्थे, मरे । गरिबको मृत्युको कहाँ हिसाब राखिन्छ र ? पति मरे, बालबच्चा पनि भएन । अब गाउँमा सहयोग गर्ने पनि कोही भएनन् ।
रासन कार्ड र विधवा भत्ताका लागि महिला सरकारी कार्यालय धाउन थालिन् । सहुलियत कार्ड भए बाँच्न सकिन्थ्यो । गाउँकै एउटा जानकारसँग मदत मागिन् । उनले गाउँका प्रधानलाई भेट्टाए । प्रधानले सचिवलाई भेट्टाए । सरकारी कार्यालयमा अरु बिचौलिया पनि हुन्छन् । सबैले काम हुन्छ भने र मागे थोरै घुस ।
एउटा विधवा गरिबसँग के हुन्छ र घुस दिन ? सबैले हाकाहाकी भने, ‘काम गर्ने भए हामीसँग सुत्न पर्छ ।’ मान्छे बाध्यतामा परेपछि बाँच्नलाई के गर्दैन ? उनले एउटै विकल्प त्यही देखिन् र सम्बन्ध राखिन् । र, गाउँका १३ जना जसलाई एड्स भएको छ, यी सबै तिनै हुन्, जसले रासन कार्ड र विधवा भत्ताका लागि यिनलाई शोषण गरिरहे ।
तीन वर्षसम्म १३ समाजसेवीले विधवासँग सम्बन्ध बनाइरहे । उनीले पनि आफूसँग भएको ‘घुस’ दिइरहिन् । एक जना, दुई जना होइन, १३ जना खुशी थिए ।
तीन महिनाअघि उनी बिरामी परिन् । प्रधानलाई भनिन् । प्रधानले उपचार गराए । तर कम भएन बिरामी । डाक्टरकहाँ गएर रगत जचाइयो । र, प्रधानकै होस उड्यो । महिलालाई त एड्स रहेछ । उनीसँग सम्बन्ध राख्ने सबै आत्तिए । अर्को मेडिकल कलेजमा गएर दोस्रोपटक रगत जचाइयो, त्यहाँ पनि रिपोर्टमा एड्स देखियो ।
Prevभारतीय कूटनीति र ‘विषकन्या’
Nextतुलसीपुरलाई स्मार्ट सीटी बनाउने हाम्रो योजना छ